साथीहरूसँग घडी 35
किन सर्पलाई फरक मान्छेले यति फरक मान्छे? कहिलेकाँही सर्पलाई दुष्टको प्रतिनिधिको रूपमा बोलाइन्छ भने कहिलेकाँही बुद्धिको प्रतीकको रूपमा। किन मानिसहरूलाई सर्पको त्यस्तो अन्तर्निहित डर छ?
शिक्षा र प्रशिक्षणको धेरै तरीकाले मानिसलाई सर्प र अन्य सबै प्राणीहरूसँग व्यवहार गर्नेसँग छ। तर मानिसमा आफैंमा उसको शिक्षा बाहेक केही कुरा छ जुन बाँकीको लागि लेखिएको छ। सर्पलाई विषाक्त र दुष्टको रूपमा वा बुद्धिको प्रतीकको रूपमा राम्रोसँग मान्न सकिन्छ। यो लिइएको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ। केही सर्पहरूले खाँदा सिन्दूरको विनाशको अलावा, सर्पले मानिस र संसारमा खास फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन, वा उनीहरूले अरू जनावरहरू भन्दा अद्भुत बानीहरू प्रदर्शन गर्दछन्, वा उनीहरूले बुद्धिको लक्षण अन्य भन्दा बढी देखाउँदछन्। पशु रूपहरू। यसको विपरित, तिनीहरू कहिलेकाँही बहिरा र अन्धा हुन्छन्; तिनीहरू आफूलाई अचाक्ली जबरजस्ती डुबाउन सक्छन् र आफ्नो बचाव गर्न सक्दैनन् वा खतराबाट बच्न सक्दैनन् र केही सर्पले टोकेपछि मृत्यु हुने सम्भावना धेरै खतरनाक छ। तर त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा थोरै सर्पहरू छन् जुन हानिविहीन छैन, र सर्पको चालहरू सबै प्राणीहरूको सबैभन्दा रमाईलो र द्रुत हो।
त्यहाँ केहि पनि छैन जो सर्पले गर्छ र न कुनै उद्देश्यले यसको सेवा गर्छ जसले यसको कुरा जनावरको बुद्धिमत्ताको रूपमा वा बुद्धिको प्रतीकको रूपमा बोल्ने गर्दछ। यद्यपि शुरुदेखि नै agesषिहरूले यस विषयमा बोले र धर्मशास्त्रले यसलाई सबै प्राणीहरूमध्येको ज्ञानीको रूपमा उल्लेख गरेको छ र यसलाई बुद्धिको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरेको छ।
त्यहाँ सर्पलाई बुद्धिको प्रतीक हुन सक्ने थुप्रै कारणहरू छन्। सर्पले प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि अरू प्राणीहरूभन्दा उत्तम यो ब्रह्माण्डको विद्युतीय शक्तिसित सम्बन्धित छ र उत्प्रेरित छ, जुन शक्तिले मानिसलाई बुद्धि दिन्छ, जब मानिसले आफूलाई यो प्राप्त गर्न तयार पार्छ। मानिसको वर्तमान अवस्थामा उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ र यो शक्ति उहाँ मार्फत कार्य गर्न असक्षम हुनुहुन्छ। यस विघुतीय शक्तिको प्रत्यक्ष कार्य अनुमति दिन साँपको जीव यत्तिको गठन गरिएको छ। तर सामर्थ्यले सर्पलाई बुद्धि दिदैन; यो केवल सर्पको शरीर मार्फत कार्य गर्दछ। दिमाग सजग हुन र बुद्धिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यो सर्प छैन। सर्पको सबै भन्दा पूर्ण र आर्थिक हिसाबले जनावरको शरीर छ। मेरुदण्डको स्तम्भ साँप भरि चल्छ, र यो मेरुदण्डको स्तम्भ हो जसबाट विद्युतीय शक्तिले कार्य गर्दछ। मानिसमा मेरुदण्डको स्तम्भ सर्पको रूपमा रहेको छ, तर मानिसमा मेरुदण्डले विद्युतीय शक्तिलाई यस मार्फत प्रत्यक्ष कार्य गर्न अनुमति दिँदैन किनकि वर्तमान प्रयोगहरूले स्पाइनल स्तम्भबाट चालूलाई प्रयोग गर्दछ जसको स्नायु धाराले मेरुदण्डबाट निकाल्ने शरीरलाई राखिन्छ। स्नायुहरूको वर्तमान व्यवस्था र स्नायु धाराको प्रयोगले विश्वव्यापी विद्युत शक्तिलाई सीधा शरीर मार्फत कार्य गर्नबाट रोक्छ र मानिसको दिमाग प्रबुद्ध गर्दछ। शरीरको उदर र श्रोणि क्षेत्रहरूमा स्नायुहरू कुइल्ड गरिएको हुन्छ, सर्प जस्तो। यी स्नायुहरूले अब तिनीहरूको कार्य शक्तिको साथ उत्पादक अंगहरू आपूर्ति गर्छन्। पूर्वी पुस्तकहरूमा यो भनिएको छ कि कुण्डलिनी, सर्प शक्ति, शरीर भित्र कुइलाइ र निद्रामा छ; तर जब यो सर्प शक्ति जागृत हुन्छ यसले मानिसको दिमागलाई उज्यालो पार्नेछ। व्याख्या गरिएको, यसको मतलब शरीरको केही स्नायु प्रवाहहरू, अब अप्रयुक्त वा दुरुपयोग भएका, तिनीहरूको उचित कार्यमा बोलाउनु पर्छ; त्यो हो, ती खोलिन्छ र मेरुदण्डको साथ जोडिने छ। यसो गर्नु भनेको विद्युतीय स्विचबोर्डमा कुञ्जी टर्भ गर्नु जस्तै हो जसले चालू खोल्छ र मेशिनरीलाई सञ्चालनमा सुरू गर्दछ। जब वर्तमान खोल्दछ र मानिसको शरीरमा मेरुदण्डसँग सम्बन्धित हुन्छ बिजुलीको पावर अन हुन्छ। यो वर्तमान पहिलो शरीर को तंत्रिका मार्फत कार्य गर्दछ। यदि शरीरको स्नायु संगठन मजबूत छैन र फिट वर्तमान को तंत्रिका जलाउँछ। अयोग्य व्यक्तिको अनुसार, यसले शरीरलाई बिरामी, अव्यवस्थित, पागलपन उत्पन्न गर्ने वा मृत्यु निम्त्याउने छ। यदि स्नायु संगठन फिट छ भने शक्ति सूक्ष्म रूप शरीरको विद्युतीकरण गर्दछ र दिमागलाई स्पष्ट पार्छ र उज्यालो पार्दछ, ताकि लगभग द्रुत रूपमा दिमागले भौतिक संसार वा सूक्ष्म संसारको बारेमा कुनै पनि विषयको बारेमा जान्न सक्दछ। यस शक्तिमा सर्पको आवागमन हुन्छ र यसले मेरुदण्डको स्तम्भ भित्र मेरुदण्ड मार्फत कार्य गर्दछ, जो सर्पको रूपमा छ। सर्पले झैं, शक्तिले जो मर्छ उसलाई मृत्यु गराउँदछ र यसलाई मास्टर गर्न सक्षम छैन। सर्पले जस्तै, शक्तिले नयाँ शरीरको विकास गर्दछ र सर्पले आफ्नो छाला बहाउँदा उसको पुरानो बहाउँदछ।
मानिसलाई जनावरहरूको एक अन्तर्निहित डर छ किनकि संसारमा प्रत्येक पशु मानिसमा इच्छाको एक अलग र विशेष प्रकार हो, र मानिससँग डराउने जनावरले उसलाई आफ्नो अभिलाषाको विशेष रूप देखाउँदछ जुन उसले महारत नगरेको हो। जब उहाँ मालिक र आफ्नो इच्छा नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ मानिसले जनावरलाई डराउँदैन र पशुलाई कुनै डर हुँदैन र उसलाई नोक्सान गर्ने छैन। मानिसलाई सर्पको आन्तरिक डर हुन्छ किनकि उसले मास्टर गरेको छैन र सर्पले प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर सर्पले मानिसलाई आकर्षित गर्दछ, यद्यपि उसलाई यो डर छ। बुद्धिको धारणा पनि मानिसमा आकर्षक छ। तर उसले बुद्धि प्राप्त गर्न अघि डराउनुपर्दछ र सत्यलाई प्रेम गर्नुपर्दछ, अन्यथा सर्पले जस्तो शक्तिले उसलाई नाश गर्छ वा पागल बनाउँछ।
के कथाहरूमा कुनै सच्चाइ छ कि रोजसिलीहरू कहिल्यै जलाउन थाल्छन्? यदि त्यसो भए, तिनीहरू कसरी बनाइए, तिनीहरूले कुन उद्देश्यले सेवा गरे, र तिनीहरू बनाइएका र अहिले प्रयोग गर्न सक्दछन्?
त्यहाँ कुनै मान्य कारण छैन कि रोसिक्रियसियनहरू वा अन्य मिडियावल शरीरहरूले सँधै जलाउने बत्तीहरू बनाउनु हुँदैनथ्यो। किन हामी आजकल सदा जलिरहने बत्तीहरू फैन्सीले आविष्कार गरेको मिथक हो भन्ने ठान्नुको मुख्य कारण हाम्रो विचारको कारण यो हो कि बत्तीहरू दिक्कलाग्दो वस्तु, जस्तै विक्स र तेल सहितको जहाज हुनुपर्छ, वा जसको माध्यमबाट बिजुलीको ग्यास प्रयोग गरिन्छ। , वा जसको माध्यमबाट विद्युत् प्रवाह बन्छ र फिलामेन्ट्सको तापक्रमबाट प्रकाश दिन्छ। बत्तीको विचार हो, कि यो त्यो हो जुन मार्फत प्रकाश दिइन्छ।
रोजिक्रुसिअन्सको कमजोर जलेको दियोलाई अव्यावहारिक मानिन्छ किनकि हामी सोच्छौं कि बत्तीले इन्धन वा कुनै चीज बिना यो प्रकाश दिन सक्दैन। यो सोचाइन्छ कि सदाको जलिरहेको दियो रोसक्रुसियन र मध्यकालीन समयको बारेमा धेरै परम्परामा प्रशस्त असंख्य कथित सम्भाव्यता मध्ये एक मात्र हो।
हामी अब भन्न सक्दैनौं कि रोसक्रुसियन वा मध्य युगका केही मानिसहरूले कसरी सदाबहार दियो बनाउँथे, तर त्यस्तो बत्ती बनाउन सकिने सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसलाई पहिले बुझ्नुहोस् कि सँधै जलिरहेको दियोले तेल वा ग्यास वा अन्य कुनै सामग्री खपत गर्दैन जुन मेकानिकल माध्यमबाट आपूर्ति गर्न आवश्यक छ। शरीर र सदाको जलिरहेको बत्तीको रूपमा प्रयोगको लागि उपयुक्त सामग्री हुन सक्दछ जुन बत्तीसलाई दिमागमा राख्नुपर्दछ जुन यसलाई गर्भवती बनाउँदछ र बनाउँदछ। बत्तीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको विशेष सामग्री हो जसको माध्यमबाट प्रकाश दिइन्छ। प्रकाश ईथर वा एस्ट्रेल लाइटबाट प्रेरित छ। यो जलिरहेको प्रक्रियाबाट उत्पादित हुँदैन। सामग्री जो प्रकाश प्रर्दशन गर्न प्रयोग गरिन्छ सावधानीपूर्वक तयार र समायोजित हुनुपर्छ वा ईथरिक वा सूक्ष्म प्रकाशमा एटनु पर्छ। यस सामग्रीको तयारी र स्फूर्तिदायी र यसलाई ईथर वा एस्ट्रल लाइटमा समायोजन रोसिकिक्रियन्स र फायर दार्शनिकहरूको रहस्य थियो। यी सबै हुन सक्दछन्, अब रेडियमको खोजले प्रदर्शन गर्दछ। रेडियमले आफैंको उपभोग नगरी वा मात्रामा घटाए बिना नै प्रकाश दिन्छ जस्तो देखिन्छ। रेडियमले आफैंबाट प्रकाश दिन्छ जस्तो छैन। प्रकाश रेडियम द्वारा प्रेरित र फोकस गरिएको छ। रेडियमले शेड गरेको जस्तो देखिन्छ प्रकाश ईथर वा सूक्ष्म प्रकाशबाट हो। रेडियमले एक माध्यमको रूपमा मात्र काम गर्दछ जसको माध्यमबाट प्रकाश सूक्ष्म संसारबाट ल्याइएको र शारीरिक इन्द्रियहरूमा प्रकट हुन्छ।
रोजिक्रुसिअन्सको ज्वलन्त बत्तीहरूको उज्यालोमा आएको सामग्री उस्तै सिद्धान्तहरूको आधारमा मिलाइएको थियो यद्यपि यो भिन्न तरिकाले तयार गर्न सकिन्थ्यो र रेडियमको बाहेक अन्य पदार्थका हुनसक्थ्यो, जसबाट रेडियमबाहेक अन्य पदार्थका रूपहरू पनि थिए। ईथर वा सूक्ष्म संसारबाट भौतिक संसारमा प्रकट हुन सक्छ।
सँधै जलिरहेको बत्तीहरू धेरै र बिभिन्न उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएको छ। एक उद्देश्यको लागि निर्माण गरिएको बत्तीहरू सबै प्रयोगहरूमा राख्न सकिदैन जसको लागि सँधै बालेर बनाइएको थियो। उदाहरणका लागि, रेडियमले उज्यालो दिन्छ, तर रेडियम अब प्रकाशको लागि प्रयोग गरिंदैन किनकि यसलाई प्रयोग गर्नका लागि यसका निम्ति तयार पार्नु अत्यन्त महँगो मात्र होईन, तर किनभने प्रकाश विकिरणले जनावरहरूको शरीरको नजिक घाइते बनाउँछ।
यहाँ केहि उद्देश्यहरू छन् जसको लागि सँधै बत्तीहरू बनाइएको र प्रयोग गरिएको हुन सक्दछ: गोप्य जमघटहरूमा प्रकाश दिन; सूक्ष्म संसार र यसका केही संस्थाहरूको खोजी र अनुसन्धान गर्न; प्रतिकूल प्रभावहरू र संस्थाहरूलाई कार्यमा विरोधाभास राख्न टाढा राख्न जुन एक वा बढी संलग्न भएको हुन सक्छ; निद्राको बखत वा ट्रान्समा हुँदा शारीरिक र सूक्ष्म शरीरको रक्षा गर्न; रूपान्तरणको लागि धातुहरूको उपचारको लागि एक साधनको रूपमा; औषधीय उद्देश्यका लागि वा श्रापलाई प्रभाव पार्नेको लागि केहि सरलहरू तयार गर्ने माध्यमको रूपमा; शारीरिकको इन्द्रियलाई सूक्ष्म वा भित्री इन्द्रियहरूमा समायोजित गर्न जसद्वारा नदेखिने सूक्ष्म संसारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ।
अन्य सँधै जलाउने बत्तीहरू अब बनाउन सकिन्छ, तर यिनीहरू भविष्यमा निर्माण हुन सक्दछन्, तिनीहरूलाई अब प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन। तिनीहरू मानसिक वा सूक्ष्म अभ्यास र उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको छ। यस्तो कामको समय बितिसकेको छ। मानिसको दिमाग त्यस्ता अभ्यासहरूबाट बढ्दै जानुपर्दछ। के यो सूक्ष्म माध्यम द्वारा नियन्त्रित थियो हुन सक्छ र अब दिमाग द्वारा र मानिसका आफ्नै शरीरहरु द्वारा सुसज्जित भन्दा अन्य माध्यम बिना नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। दिमाग आफैमा एक ज्योति हुनुपर्छ। यसको शरीर बत्ती हुनु पर्छ। मानिसले आफ्नो शरीर तयार पार्नु पर्छ र दिमागलाई यत्तिको नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ कि दिमाग यसको माध्यमबाट चम्किन्छ र वरपरको विश्वलाई उज्यालो बनाउँदछ, र मानिसलाई सदाको लागि बत्ती बालेको सदाको लागि बत्ती रहेको देख्ने मानिसलाई बनाउँदछ।